Omama - Bezzia | Bezzia
Yiba ngumama Kungumzuzu obalulekile ezimpilweni zabesifazane, esinye sezikhathi ezinhle kakhulu ezimpilweni zabo kepha futhi singesinye sezibopho. Ngalesi sizathu, kusuka eBezzia sifuna ukukunikeza izeluleko ukuze le nqubo yenziwe ngokujwayelekile: kusukela ekukhulelweni kanye nokungabaza okungavela ngalesi sikhathi kuze kube semfundweni yezingane lapho zingakabi zincane kangako.
Esigabeni omama Kuzoba nezihloko eziningi ezithokozisayo zabesifazane abanezingane: yikuphi ukudla okufanele bakudle noma bangakudli ngesikhathi sokukhulelwa, ukubaluleka kokudlala ezinganeni, amathiphu esikhathi lapho kuphuma khona amazinyo noma ukuthi kufanele uziphathe kanjani uma unengane engaphezu kweyodwa.
Futhi, ngeke kube khona kuphela amathiphu nolwazi oluwusizo, kepha kuzozama ukucabanga ngomhlaba oyinkimbinkimbi wokuba ngumama. Isimo esisha kubantu abaningi kodwa lokho kugcina sekuba esinye sezikhathi ezibaluleke kakhulu empilweni.
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinsuku ze-3 .
Bonke abazali bayavuma ukuthi ukukhulisa nokufundisa ingane akuyona into elula futhi ...
Ungayibona Kanjani Ingane Enobuthi
Ubuthi akuyona inkinga eyenzeka kuphela kubantu abadala, njengoba kungenzeka futhi kube ...
Ukuhlanzeka ngamakhala ezinganeni kungumsebenzi abazali okufanele bawenze ngokucophelela nangobumnandi. Ikona…
Izifo ezibangelwa esiswini nasemathunjini ziya ziba njalo futhi zivamile ezinganeni ...
Uzwela lungenye yamagugu abaluleke kakhulu kumuntu. Kungumthamo ...
Ungazivikela kanjani izingane ekubeni namaphupho amabi
Kujwayelekile impela ukuthi izingane ezineminyaka ethile yobudala zithambekele kakhulu emaphusheni amabi. Iqiniso ukuthi ngiyazi ...
Inhlanzeko esondelene ngesikhathi sokukhulelwa
Ngaphandle kokukhathazeka kwabesifazane abaningi abakhulelwe, iphunga lomzimba elinamandla, ikakhulukazi ezingxenyeni ezisondelene, liyinto ...
Migraine ezinganeni nasebusheni
Idatha ikhombisa ukuthi i-migraine uhlobo oluvame kakhulu lwekhanda emhlabeni wonke. Ku…
Kuyinto ejwayelekile ukuthi abesifazane abaningi ngemuva kwamahora angama-48 bebelethile, baba nokuhlushwa okuqinile esibelethweni…
Ukubaluleka kwempilo engokomzwelo ezinganeni
Bambalwa abazali abazi ngokuqinisekile ukuthi ukuhlakanipha okungokomzwelo kubandakanya ini. Lesi sici sidlula ngokuphelele ...
Isikhathi okuthiwa yi-turkey ebusheni
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinyanga ze-3 .
Akekho ophikisana neqiniso lokuthi akulula noma kulula ukukhulisa ingane. Zonke izigaba ...
Ukusetshenziswa kweVicks Vaporub
Kungani ucansi lubuhlungu ngemuva kokubeletha
Ingabe ukungabikho kwabazali kuyayithinta intsha?
Imibuzo nezimpendulo Ngokuthomba
Izindlela ezi-6 ezilula zokususa i-tattoo yesikhashana
I-Oedipus ne-Electra complex, ukuheha izingane kubazali bazo